Back to School / Back to School: Soomaali
Wali Waxaad Haysataa Wakhti aad isaga Diwaangaliso Dayrta!
Wac Xarunta Meelaynta Ardayda 651-632-3760. Waxaa jooga shaqaale luqado kala geddisan ku hadla.
Waxyaabaha Asaasiga ah marka Iskuulada lagu Noqonayo
Liiska Waxyaabaha Ardayda Laga Rabo In Ay Iskuulada Kula Laabtaan
Liiska waxyaabaha ay ardayda u baahan yihiin marka ay iskuullada ku noqonayaan wuxuu ku daabacan yahay boggaga interneedka ee iskuulada ama MySPPS mobile app.
Waxaad hubisaa in ilmahaaga ay tallaaladu u idil yihiin isla markaana waxaad diiwaanada talaalka ilmahaaga keentaa iskuulka. Waxaad faahfaahin ka heli kartaa spps.org/studentwellness.
Dhamaan ardayda galaysa fasalka Kindergarten waa in ay maraan baaritaanka dhallaanka ee lagu qiimeeyo baahida ardayda ee dhanka aragga, maqalka iyo korriinka. Baritaannada waxay lacag la’aan u yihiin dhammaan dhallaanka da’doodu u dhexeysa 3- 5 sano ee ku nool degmada Saint Paul. Wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad ka wacdaa 651-632-3746.
Ardayda dugsiga sare waa in ay seddexdii sanaba maraan baritaanno caafimaadka jirka ah si ay uga qayb qaataan ciyaaraha isboortiga. Foomka baritaanka caafimaadka ee jirka, ee la laga rabo in uu dhakhtarkaaga kuu soo buuxiyo, waxaad ka heli kartaa barta internet-ka ah ee spps.org/sports.
Caafimaadka iyo Dawooyinka
Haddii uu cunugaagu u baahanyahay in uu daawo qaato inta iskuulka la joogo maalintii waxaad arintaas kala xiriirtaa kalkaalisada caafimaadka ee iskuulka.
Caruurta xaqa u leh cuntada iskuulka ee qiimaha jaban ama lacag la’aanta ah waxaa dhici karta in sidoo kale ay xaq u leeyihiin caawimaadyada sida: Minnesota health insurance (Medical Assistance; MinnesotaCare, ama MNsure); Women, Infants and Children (WIC); ama food support. Kalkaalisa caafimaadka ee iskuulkaaga kala hadal wixii su’aal ah ee arimahaan ku saabsan.
Hadii aad ka guurtay gurigii hore oo aad deganayd ama aad badashay halkii caruurta laguugu hayey fadlan wac iskuulkaaga oo la socodsii cinwaankaaga cusub si markaasi uu darawalka baska cunugaaga uu u ogaado halka uu ka qaadayo. Haddii aad guurtay oo aad u baahantahay inaad ilmaha iskuulka ka badasho kadib markii aad u guurtay Xaafad Cusub ama aag cusub oo tii hore ka duwan, waxaad wacdaa Xarunta Meelaynta Ardayda 651-632-3760.
Xiriir Joogta ah la yeelo iskuulkaaga
Soo gudbi taleefonada, emailka iyo siyaabaha kale ee laguula soo xiriiri karo ama adigoo isticmaalaya iUpdate-ka 2019 ee Back-to-School ood ka heli karto spps.org/onestop. Marka lagaa hayo meelo sax ah oo lagaala soo xiriiri karo, iskuulka waxaa u fududaanaysa inuu farriimaha muhiimka ah ama xaaladaha deg degga laguu soo gudbiyo I dhakhsa ah.
Gaadiidka Baska ee Iskuulka
Baska Iskuulka oo racaa waa wadada ugu sahlan uguna amaansan ee lagu tagi karo iskuulka
Adeegyada Gaadiidka waxaa xaq u leh:
Ardayda ku nool aagga ay u xil saaran yihiin iskuullada bulshada, kuwa gobolka iyo kuwa Magnet-ka ah.
Ardayda dhigata dugsiyada hoose (K-5) oo ku nool meel in kaban nus-mayl u jirto iskuulka.
Ardayda dhigata dugsiyada dhexe iyo sare (fasallada 6-12-aad) ee ku nool meel hal mayl ka dheer u jirta iskuulka.
Fadlan Ogow: Ardayda galinka hore ama subaxdii dhigta Pre-K waxaa laga qaadayaa meelaha caadiga ah ee uu basku istaago, waxaana lagu soo celinyaa gurigooda ama meel u dhow. Ardayda galinka dambe dhigta Pre-K, waxaa laga qaadaya guryahooda ama meel u dhow, lakiin waxaa lagu soo celinayaa meelaha uu baska istaago.
Inta ka horreysa maalinta Jimcaha ah, Agoosto 16, soo buuxi iUpdate-ka sanadka 2019 adigoo booqanaya spps.org/onestop si aad u cusboonaysiiso cinwaanka gurigaaga iyo cinwaanka xaruntaada carruurta lagu hayo. Hadii aadan hubin in aad gadiidka baska xaq u leedahay iyo in kale, la xiriis iskuulkaaga ama Waaxda Meelaynta Ardayda ood ka wici karto 651-632-3760.
Cun Cunto Wacan
Waxaa iskuullada SPPS farxad u ah in ay ardaydooda siiyaan quraac lacag la’aan ah. Marka uu ardaygu iskuulka yimaado isla markiiba wuxuu hore u sii qaadanayaa quraacdiisa oo uu ku cuni karo fasalka dhexdiisa. Cunnoyinka quraacda ah waxaa ka mid ah waxyaabaha la dubo sida rootiga, yoogat, cereal iyo waliba khudrad.
Cuntada iskuulka waxaa ku jira cuntooyin maxalli ah oo ka soo go’ay degaanka, iyadoo la helayo hilbo kala nooc ah, qamadi, midho iyo khudrad cusub oo nadiif ah. Menu-ga cunnada waxaa inta badan isla diyaariyay waalidka iyo madaxa kuug iskuullada. Sanadkan waxaa cusub chicken alfredo, tamales iyo cuntooyin kale oo laga diyaariyay hilibka digaaga.
Qiimaha Cuntada ee 2019-20*
Fadlan ogow qiimaha caadiga ah ee cuntadu wuxuu kor u kacay 10 senti (cents).
Fasallada PreK-5 $2.50
Fasallada 6-8 $2.70
Fasallada 9-12 $2.90
*Iskuullo badan ayaa iminka qayb ka ah barnaamijka Community Eligibility Provision (CEP) iyadoo ardaydu ay helayaan cunno caafimaad leh oo lacag la’aan ah. Dhammaan ardaydu waxay helayaan quraac lacag la’aan ah. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, booqo spps.org/nutrition.
Bixinta Lacagta Cuntada
Arday walba wuxuu leeyahay lambar ama PIN-ka cunnada oo la mid ah ID-ga ardayga ee iskuulka. Ardayda waxa ay weydiin karaan macalinka haddii aynan garanaynin lambarkooda ID-ga.
Caruur haynta ka-hor iyo ka-dib saacadaha iskuulka
Barmaamijka Discovery Club waa mid bixiya adeegyo caruur-hayn ka hor iyo ka-dib saacadaha iskuulka, maalmaha uusan iskuulku jirin iyo xilliga fasaxa xagaaga. Hadaba si aad u ogaato qiimaha caruur-haynta iyo macluumaad kale oo ku saabsan barmaamijka iyo waliba qaabka loo codsado wac telefoonkan 651-632-3793 ama booqo spps.org/discoveryclub.
App-ka cusub ee MySPPS kala soco waxyaabaha ku soo kordha Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul. Waaxaad app-ka kala socon kartaa akhbaaraadka ku saabsan iskuulka uu ilmahaagu dhigto, basaska iskuullada, jadwalka ciyaaraha sportiga iyo waxyaabo kale. App-ka cusub ee “MySPPS” ka dhex-raadi kana soo rogo Google Play ama Apple App Store-ka. Booqo spps.org/MySPPS si aad wax badan ka ogow app-ka.